Ciidamada amaanka oo Muqdisho ku toogtay nin hubeesan oo Miino aasayay
Sunday September 06, 2020 - 23:50:19 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa xalay saqdii Dhaxe xaafada Suuq Bacaad ee degmada Yaqshiid ku dilay nin hubeesan
oo qeyb ka ahaa sadex nin oo miino ku aaseesay xaafada Suuq Bacaad.
Guddoomiye kuxigeenka Arrimaha Bulshada degmada Yaaqshiid C/llaahi Shiilow ayaa sheegay in ciidamada amaanka xalay saqdii Dhaxe ka warheleen sadex nin hubeesan oo miino ku aaseesay xaafada Suuq Bacaad.
Shiilow ayaa sheegay in ciidamada amaanka oo isku dayay in ay soo qabtaan raga miinada aasayay iska hor imaad kala kulmeen, waxa uuna sheegay in goobtaasi lagu dilay mid kamid ah sadexdii nin ee hubeesnaa ee goobtaasi miinada ku aaseesay.
Gudoomiye kuxigeenka arimaha bulshada degmada Yaqshiid ayaa sheegay in laamaha amaanka ku daba jiraan labada nin kale ee ka baxsaday , waxa uuna sheegay in degmada Yaqshiid ka socdaan howlgalo amaanka lagu xaqiijinayo.
Qaraxyada miino ee lagu aaso wadooyinka magaalada Muqdisho ayaana mudooyinkan dambe soo badanayay, waxaana qaraxii ugu dambeeyay oo miino xalay ka dhacay agagaarka Isgooska Sayidka ee magaalada Muqdisho.